महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन : बेरुजू १ खर्ब ३ अर्ब | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन : बेरुजू १ खर्ब ३ अर्ब
मुख्य खबर, समाचार 63 views
महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन : बेरुजू १ खर्ब ३ अर्ब
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा रू. १ खर्ब ३ अर्बको बेरुजू थपिएको छ । आव २०७२/७३ सम्म रू. ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रहेको बेरुजू बढेर रू. ५ खर्ब ८ करोड पुगेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजू ५ खर्ब नाघेको देखाएको हो ।
आव २०७३/७४ मा ४ हजार ८ सय १२ सरकारी कार्यालयको रू. १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण भएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तीय लेखापरीक्षणसँगै कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई पनि लेखापरीक्षणमा समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयको बेरुजू रू. २ खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड देखिएको छ । गतवर्षसम्म यस्तो बेरुजू रू. १ खर्ब ६७ अर्ब थियो । सरकारी कार्यालयबाहेक लेखापरीक्षणमा ७५ जिल्ला विकास समिति, ७ सय ३८ स्थानीय तह, ३ हजार ३ सय ७४ साविकका स्थानीय निकायलगायत ९ सय ८२ निकाय समावेश छन् ।
लेखापरीक्षण भएको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै बेरुजू खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा देखिएको छ । सो मन्त्रालयले रू. ९३ करोड ४४ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने रू. २ अर्ब २० करोडको हिसाब मिलेको छैन । साथै रू. २ अर्ब ६१ करोड पेश्कीको बिल भर्पाई प्राप्त हुन बाँकी गरी कुल रू. ५ अर्ब ७५ करोड बेरुजू देखिएको छ । यो लेखापरीक्षण भएको रू. २९ अर्ब ३३ करोड को १९ दशमलव ६१ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयकोे रू. ५ अर्ब १२ करोड बेरुजू देखिएको छ । यो बेरुजू लेखापरीक्षण अङ्कको १८ दशमलव ३३ प्रतिशत हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालको बेरुजू रू. २१ अर्ब २७ करोड छ । यो कुल बेरुजूको सबैभन्दा धेरै २२ प्रतिशत हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बेरुजू लेखापरीक्षण भएको कारोबारका आधारमा भने १७ दशमलव ६५ प्रतिशत हो ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था र जिल्ला विकास/समन्वय समितिले प्रचलित कानूनी प्रक्रिया नपु¥याई गरेको खर्च, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित तरीकाले गरेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजू भनेको छ ।
लेखापरीक्षण कसकसले गरेनन्
नेपाल खानेपानी संस्थान
नेपाल खाद्य संस्थान
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी
प्राविधिक सहायता लेखाङ्कन नगरिएको
दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा १ अर्ब ७१ करोड छूट दिइएको
कानूनविपरीत योजनालाई बहुवर्षीय सहमति दिइएको
भेटीघाटीको समुचित व्यवस्थापन हुन नसकेको
कर्मचारीको विदेश भम्रणको औचित्य पुष्टि नभएको
शेयरको पूँजीगत लाभकर गणना गलत
धितोपत्र व्यवसायी कमिशनबाट भ्याट नतिरेको
संस्थानले लाभांश नबुझाएको
राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीलाई तलबको दुई गुणा भत्ता